Jaaliyadda Puntland ee Finland oo Hambalyo u dirtay wakiilka Puntland u Fadhiya Swedan – Radio Daljir
Abriil 20, 2018 3:49 g 1
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta magacaabay wakiilka Puntland u Fadhiya Swedan ka dib mar wakiilkii hore xilka laga qaaday.
Hadaba wakiilka Cusub ee maanta madaxweynuhu magacaabay mudane Cabdicasiis Cilmi Birjeeb ayaa ah nin aqoontaa iyo kartidaaba leh horayna u soo qabtay xilkan.
Wakiil Cabdicasiis ayaa ah nin dhalinyaro ah oo aqoon duruksan u leh arimaha siyaasada iyo xiriirka caalamiga waxuna u ahaa shaqsi si madaxbanaan ugu adeega Puntland.
Waxanu leenahay Hambalyo wakiilka cusub oo aad
loogu hanwayn yahay rajo badana laga qabo waxaana sidoo kale hambalyeyneynaa Madaxweynaha Puntland oo qof arintaa qaban kara soo magacaabay.
WAA KUMA CABDICASIIS CILMI BIRJEEB.
Cabdicasiis Cilmi Birjeeb Wuxuu Ku dhashay Kismaayo, iskuulkiisii hoosse dhexe iyo Sareba wuxuu ku soo qaatay Kismaayo,Wadanka Swedan wuxuu ku Takhasusey Cilmiga aasaasiga ah Pre-school teacher waa bare wax ka dhiga dugsiyada dalka Swedan gaar ahaan dugsiga hoose dhexe.
Cabdicasiis Cilmi Birjeeb waxa uu ku waaniyaa dadka soomaaliyed inay xoog saaraan waxbarashada.
Waxa Cabdicasiis jecel yahay in uu aqoontiisa iyo xoogiisa uugu shaqeeyo dalkiisa iyo dadkiisa,waxa uu dadka ku waaniyaa in halkan wax laga barto oo aqoonta halkan taala la qaato kadibna dalkeenii aynu ula noqono oo ku hormarino intaan halkan joognana ninkaan shaqaynayn waa in uu waxbartaa.
Cabdicasiis Waxa uu inbadan gacan qabtay qurbajoogta soomaaliyeed ee swedan kunool,isagoo ku caawiyay arimo badan sida waxbarashada,talo iyo gubaabo in ay waxbartaan oo waliba ku gacansiiyay,shaqo laraadin iyo tilmaan.runtiina dadka soomaaliyeed waa umahad celinayaa wanaaga Cabdicasiis.
SIDOO KALE CABDICASIIS CILMI BIRJEEB WUXUU KA MID YAHAY GUDIGA SHINSIGA DALLADA PEDAN.
Dallad qurbajoogta Puntland ee Finland.
Mudane Cabdicasiid hambalyo, iyo guul baan Eebe kaaga Ramayana in xilka laguu magacaabay Rabbi kuu fududeeyo, Aamiin.
Isku xidh jaliyadaha Reef PL iyo Dal-Ugug, Dal-Udug iyo dalka aad joogto, siiba, xagga, mashaariicda, caafimaadka, wax-barashada, biyo xireennada, arrimaha deegaanka, taba-barada, horumarinta xoolaha, kalluumaysiga, iyo u-qareemidda Reer Dal-Udug dhan walbaba.